Iskuulada degmada 742 ayaa bixiya cuno caafimaad leh maalin kasta. Qiimaha quraacda Iskuulada Hoose waa $ 1.50 iyo kharashka qadada oo ah $ 2.55. Qiimaha quraacda Iskuulada sare waa $ 1.55 iyo kharashka qadada oo ah $ 2.75. caano, qado qabow / qiimaha caano dheeraad ah, cuno fudud waa .45 dhamaan ardayda oo dhan iyadoo aan loo eegin heerka xaaladda qadada ah.
ISD 742 Nutritional Services Dept1000 44th Ave. N.Suite 100St. Cloud MN 56303-2037
Caruurta ka qeybqaadaneysa barnaamijka WIC waxaa lagayaabaa in ay xaq uyeeshaan Cuntada bilaashka ah ee Iskuulka. Fadlan buuxi arjiga gargaarka. Lambarka kiiska WIC micnihiisa ma aha inaad u qalantid barnaamijka. Malaga yaabaa inaan Codsado hadii qof katirsan qoyskayaga aanan aheyn wadani Mareykan ah ?